Lahatsary resadresaka momba ny fikatrohana nomerika sy ny media sosialy any India nifanaovana tamin’i Gaurav Mishra · Global Voices teny Malagasy
Lahatsary resadresaka momba ny fikatrohana nomerika sy ny media sosialy any India nifanaovana tamin'i Gaurav Mishra
Voadika ny 20 Febroary 2019 3:51 GMT
Ity lahatsoratra ity no faharoa amin'ireo andian-dahatsary fanadihadiana izay ho ataontsika mandritra ny volana manaraka ato amin'ny Global Voices Advocacy. Natombotsika tamin'i Robert Guerra, talen'ny tetikasa Fandaharan'asa ho an'ny Falalahan'ny Aterineto Manerantany ao amin'ny Freedom House mikasika ny fikarohana ny “Fahalalahan'ny Aterineto”.
Ao anatin'ity horonantsary ity aho nanadihady an'i Gaurav Mishra, mpiara-miasa amintsika ato amin'ny Global Voices sy ny sakaizan'i Yahoo septambra 2008! Ary manana ny toerany manokana eo amin'ny sehatra Iraisam-pirenena, Fifandraisana, Teknolojia ary Aterineto Manerantany ao amin'ny Oniversite Georgetown, momba ny andraikitry ny media sosialy sy ny fikatrohana nomerika any India.
Manomboka amin'ny hetsika Orkut an'i Shiv Sena, nasionalista Haindòa elatra havanana hatramin'ny hetsika Facebook Pink Chaddi liberaly kokoa, manadihady ny olana momba ny fifandonana ara-pivavahana hita taratra ao anaty aterineto i Gaurav ao anatin'ity tafatafa ity, fifandonana izay hita any amin'ny firenena izay mbola henjana be ny fizarazarana ara-tsaranga, sokajy sy fivavahana na dia eo aza ny ny endrika laika ao amin'ny fanjakana.
Ny sary 3D nampidirina tao anatin'ny lahatsary tsirairay dia avy amin'ny namako Astrubal avy any Tonizia.